Archive du 20171124
Tovovavy hita faty tao anaty hotely Naolana avy eo notsatotsatohana ny antsy
Hita faty tao amin’ny Hotely Violetta Ambositra Rafitoharimaka Rosalie na Tsiory 24 taona, omaly alakamisy, tokony ho tamin’ny 1 ora maraina.
Kongresin’ny HVM any Mahajanga Hotambazana volabe ireo depiote…
Loharanom-baovao avy eny anivon’ny antenimieram-pirenena no nahenoana fa hasaina hanatrika ny kongresim-paritry ny antoko HVM any Mahajanga ny 25-26 novambra izao ireo solombavambahoakan'izy ireo.
Fifidianana filoha sy depiote Mandresy no toromarika ho an’ny TIM
Tsy niandry ela fa ny ampitson’ny nihaonany tamin’ny delegasionin’ny vondrona Afrikanina notarihan’i Ramtane Lamamra dia nizara ny vaovao tamin’ireo mpiara-miasa akaiky aminy sy ireo lohandohan’ny mpisorona avy ao amin’ny antoko Tiako i Madagasikara teny Faravohitra, omaly vao maraina, Atoa Marc Ravalomanana.
Governemanta sy depiote Manao resaky ny moana sy marenina
Nambaran’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier halina raha namaly ny fanontanian’ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza izy fa tsy maintsy nakatona ny orinasa AAA Tiko ao Andranomanelatra Antsirabe satria misy ny zavatra tsy ara-dalàna.
Ny omaly tsy niova
Miarahaba jean be a ! Tena tsy niova mihitsy kosa ianao fa bolangina tsara no sady mbola be valy boraingina ihany a.
Fanaovana kolikoly Mpiraki-draharahan’ny fitsarana 2 nidoboka am-ponja
Mpiraki-draharahan’ny fitsarana roa no nidoboka am-ponja noho ny fitakiana vola 1 tapitrisa ariary ny alarobia 22 novambra lasa teo. Raha ny fizotry ny tantara dia nisy fitoriana momba ny fisian’ny raharaha kolikoly niseho tao amin’ny tribonaly Anosy nataon’ny Bianco ny fiandohan’ny volana novambra lasa teo.
Andrianina Rajoharison Tafahoatra ny famarotan’ny HVM tanindrazana
Matoa ny firenena iray efa anjakan’ny vahiny ka mihamahazo vahana izy ireo eo amin'ny tany iray, dia midika fa hanjavona ny fahefan'ny tompon-tany, ka ho lasa firenena voazanaka tanteraka indray amin'ny fomba vaovao io firenena io, hoy i Andrianina Rajoharison,
Fandoavan-ketra eto Madagasikara Anjakan’ny gaboraraka
11,9 % no tahan’ny fandoavan-ketra eto Madagasikara izay ambany dia ambany eto ambonin’ny tany.
Vary eny an-tsena Ho feran’ ny fanjakana vidiny
nona ho vidina tokana ny vidim-bary eto Madagasikara vary ato ho ato, hoy ny minisitry ny Indostria Chabani Nourdine omaly maraina raha tafaresaka tamin’ny mpanao gazety izy ;
Tsenan’i Moramanga Lehibe indrindra eto Madagasikara
Notokanana omaly alakamisy 23 novambra, ary natolotra tamin’ny fomba ofisialy ho an’ny kaominina Moramanga ny tsena vaovao izay naorina any an-toerana.
Fanarenana an’i Madagasikara Fiovan’ny toetsaina no ilaina voalohany
Maro amin’ireo Malagasy manana fahafahana mivoaka any ivelany no velom-pitsiriritana ireo firenena lalovany na eo amin’ny hakanton’ny tanàna, ny hatsaran’ny fotodrafitrasa, ny hadion’ny tanàna.
Fiahiana ara-tsosialy- Matsiatra ambony Hiezaka hanatsara ny fidiram-bolany ireo kaominina
Mba ho famahana ny olana mianjady amin’ireo kaominina ao anatin’ny faritra Matsiatra Ambony momba ny fiahiana ara-tsosialy dia nomena fiofanana ireo ben’ny tanàna sy mpanolotsaina ary mpitam-bolan’ny kaominina maherin’ny 300 ao anatin’ny distrika 7 mandrafitra ny faritra Matsiatra Ambony.
Tovovavy vao 17 taona Efa in’enina niditra ny fonja
Tovovavy vao 17 taona monja no mbola sarona tamina soloky sy tontakely tao Antsirabe.
Kitra – Ligy Vatovavy Fitovinany Iharan’ny antsojay ny kandida Giscard
Mahatsapa Atoa Andriano Giscard sy ny ekipany fa miala any ny antsojay mikendry ny hisomparana ny maha kandida azy ho filohan’ny Ligin’ny baolina kitra ao amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Andrianiaina Christian na i Nanou Ilaina eo amin’ny fiainanana rehetra ny fanatanjahantena
Hiverina eo amin’ny taranja tsipy kanetibe indray isika anio eto amin’ity pejin’ny Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy ity, taranja anisan’ny namoaka tompondaka eran-tany Malagasy maromaro ihany.
Seksion’ny rugby 3 eto Analamanga Nanao fitsipaham-pitokisana an’i Andry La Pie
Nanatanteraka fivoriambe na AGO tetsy amin’ny biraon’ny COM tetsy Ivandry omaly alakamisy 24 novambra ireo seksion’ny taranja rugby 3 eto Analamanga dia Atsimondrano,
Hifanjevo eto indray e !
Mihazakazaka ny ora sy ny fotoana ary mihazakazaka ihany koa ny raharaham-pirenena satria miha manantona hatrany ny taona 2018 hanantanterahana ny fifidianana.
Depiote Hanitra Razafimanantsoa Mitaky paikady hiombonana ny ady amin’ny pesta
Nanamarika ny depiote Hanitra Razafimanantsoa filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena Faritany Antananarivo tamin’ny fifanatrehana nivantana tamin’ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka Malagasy tamin’ireo depiote teny Tsimbazaza ny alarobia 22 novambra lasa teo,
EPP Belanitra Merimandroso Notoloran’ny Vivo Energy fitaovana ny mpianatra
Tonga nijery manokana ireo mpianatra 120 mianadahy manovo fahalalana eo anivon’ny EPP ao Belanitra, kaominina ambanivohitra Merimandroso omaly ny orinasa Vivo Energy.
Mpianatry ny INSCAE sokajy “AINA” Nanao asa sosialy teny Andoharanofotsy
Tsy mikely soroka amin’ny fanaovana asa sosialy ho fanasoavana ny fiarahamonina sy ny mpiara-belona ny sekoly ambony INSCAE (Institut National des Sciences Comptables et de l’Administration d’Entreprises).
Miss et Mister île Madagascar Tafiditra ao anatin’ireo telo voalohany i Onintsoa Daniella
Tafiditra ao anatin’ireo telo voalohany mendrika indrindra hiatrika ny dingana famaranana amin’ilay hetsika Miss et Mister île Madagascar Rasoamanitrandrasana Onintsoa Daniella, ilay tovovavy kely avy eny Andoharanofotsy,
Mpivarotra mangidy nanendaka teny Ambodivona Roalahy nidoboka any am-ponja
Nampidirina am-ponja vonjimaika omaly alakamisy 23 novambra, rehefa avy niakatra fampanoavana ireo roalahy mody nanao mpivarotra mangidy teny Ambodivona nefa mangalatra sady mamono.